Jaamacad Fursad u siinaysa Ardayda cayilan inay Buundo ugu bedesho dhimista Culeyskooda. | HimiloNetwork
Jaamacad Fursad u siinaysa Ardayda cayilan inay Buundo ugu bedesho dhimista Culeyskooda.
Posted by: Zakariya in Wararka October 22, 2017	0 148 Views
Beijing (Himilonetwork) – Dadaal ay ku doonayaan inay ku yareeyaan cayilka halista ku leh caafimaadka, Jaamacad ku taalla gobalka Jiangsu, dalka China ayaa ardayda culus ugu deeqaysa fursad ay iskugu diiwaan-geliyaan barnaamij gaar ah oo cayil-dhimista ah – halkaas oo ay ku helaan buundooyin ama darajo la eg ay culeys ama miisaan oo ay iska ridaan.
Zhou Quanfu, macalinka Jaamacadda Nanjing Agriculture University ayaa la yimid fikraddan markii uu arkay in qaar cayilan oo ardaydiisa kamid ah aysan si fiican qeyb uga qaadan shaqooyinka fasallada. Sidaas darteed, wuxuu go’aansaday inuu ku tirtirsiiyo inay fursad bannaan u tahay inay dhimaan culeyska cayilkooda si ay buundo fiican ku helaan.
60% buundada ardayga waxaa lagu salaynayaa sida fudud oo uu kaga qeyb-qaato howlaha shaqo ee Jaamacadda – taas oo ka dhigan inuu iska dhimo cayilka tan dhaafka ah ee ku raran.
40% waxaa lagu qiimeynayaa imtixaanaadka uu fasalka u galo.
Ardayda iska diiwaan-gelisa barnaamijka waxaa qasab ah inay dhimaan 7% kamid ah culeyskiisa asalka ah dhamaadka simistar kasta si ay ku helaan buundo dhamaystiran.
Howlaha cayilka dhimista waa mid isugu jirta leyli joogto ah iyo qiimeynta nuuca cunto oo uu qaadanayo. Halka ardayda kale ay toddobaadkiiba leeyihiin hal maado oo jirdhis ah, ardayda cayilan waxaa laga doonayaa 360 daqiiqo toddobaadkiiba.
Waxaa laga rabaa inay ordaan, jimicsadaan, koraan buuraha iyo wixii la halmaala.
Marka laga yimaado leyliga, waxay sidoo kale isha ku heynayaan nuuca cunto oo ay qaadanayaan. Hadda barnaamijku wuxuu u muuqdaa mid guuleysnaya. Mid kamid ah ardayda ayaa hadda kasoo dhacay 110kg ilaa 84.5kg.
Zhou Quanfu wuxuu rajaynayaa in inta kalana ay raacaan tallaabadiisa. Haddii ugu yaraan ay ka fiirin caafimaadkooda, waxay ku ilaashan karaan natiijada imtixaankooda.
Kala xiriir: hiraal86@gmail.com.
Previous: Shinbiro halistii ugu weyneyd ku haya bulshada ku nool gobal Maraykanka katirsan.
Next: Warbixin – Sida loogu dalxiis tago Beerta Nabadda.
Lakulan: 74-jir ku labista dharka gabdhaha si uu hooyadiisa gabar la’aanta ah uga farxiyo.
Bulshada – si ay Waqti fiican ugu abuuraan Lammaane xanuunsan – sameynaya fal naxariis leh!